Bogga ugu weyn / blog / Dayactirka Muraayada Musqusha, 99% Dadku wey iska indhatiri doonaan Faahfaahintaan
2020 / 10 / 21 Qoondayntablog 1915 0
Musqusha, saxanka, qubeyska iyo qolka musqusha ka sokow, musqusha waxay kaloo u baahan tahay qalab kale oo fara badan, sida armaajo, tuwaallo, iyo muraayadaha musqusha.
Musqusha ayaa ah tan labaad oo kaliya qolka fadhiga iyo qolka jiifka ee aan booqano inta badan maalin kasta, musqusha, doorka muraayada musqusha lama dhayalsan karo. Muraayad cad oo dhalaalaysa ayaa keeni karta jawi wanaagsan markaad labbisanayso. Maaddaama heerka nolosha uu soo hagaagayo, muraayada looma isticmaalo oo keliya in lagu dhaqo ama lagu shanleeyo.
Dhererka Muraayada Musqusha
Dhererka muraayadda ayaa ah waxa ugu horreeya ee aan tixgelinno rakibidda, maxaa yeelay si ka duwan muraayadaha kale ee gudaha, waxaan caadi ahaan doorannaa inaan eegno muraayadda taagan ee musqusha. Dhererka muraayadda waa in lagu hagaajiyaa iyadoo la raacayo dhererka xubnaha qoyska, dhererka muraayadda waa in lagu hayaa qiyaastii 1 mitir 3 mitir dhulka. Caadi ahaan waxaan door bidnaa inaan ka dhigno bartamaha muraayada dusha sare 160-165 cm.
Sababtoo ah cabirka muraayada oo kala duwan, sida caadiga ah waxaa jira shan dariiqo oo lagu hagaajiyo muraayada: hagaajinta fur, ciddiyaha oo la hagaajiyo, isku xidhka isku xidhka, hagaajinta cadaadiska iyo hagaajinta taageerada isku xidhka. Hab kasta wuxuu leeyahay astaamo u gaar ah iyo adeegsigiisa.
Kaliya maahan inaan ubaahanahay inaan qaabeyno dhererka markaan rakibeyno muraayadda qubeyska, waxaan sidoo kale u baahanahay inaan ka feejignaano waxyaabaha soo socda.
Muraayadda qubeyska waa in lagu dhejiyaa meel ka fog qubayska ama barkadda qubeyska si loo siiyo meel ballaaran oo loogu talagalay howlaha lagu maydho.
Maaddaama maydhashadu ay dhaliso hawo kulul, waxaan tixgelin karnaa iibsashada muraayadaha ka hortagga ceeryaanta.
Qarsoodiga iyo tixgelinta feng shui, muraayada waa inay u wajahdaa darbiga sida ugu macquulsan ugana fogaataa inay u jeedaan albaabka ama daaqadda.
Markaad dooranaysid nalalka booska musqusha, waxaan tixgelin karnaa isticmaalka nalalka hoose ama nalalka derbiga. Kuma talineyno in nalalka nalalka lagu rakibo musqusha, inkasta oo nalalka nalalka ahi ay qurux badan yihiin, laakiin saamaynta ka hortagga biyuhu guud ahaan waa mid liidata, guud ahaan ma sii dheeraan doonto ka hor dhicitaanka.
Muraayadda Musqusha ma fududa in lagu rakibo daaqadda albaabka, si looga fogaado milicsiga muraayadda markaad aragto waxyaabo xun, oo keenaya argagax, argagax, gaar ahaan habeenkii.
Dad badan oo milkiileyaal dayactir ah ayaa si ula kac ah u yareyn doona booska musqusha ee howlaha dib u habeynta, si ay u weyneeyaan qolka jiifka ama qolka fadhiga, ka dibna iyagoo muraayadda muraayadda u sameeya si ay u abuuraan dhalanteed bannaan, iyada oo loo marayo aragtida khaldan si kor loogu qaado qolka musqusha. Haddii ay dhacdo inaad u fikirto si isku mid ah, markaa waa lagama maarmaan inaad isku daydo inaad u doorato midabada khafiifka ah ee musqushaada, midabada fudud waxay ka dhigi karaan musqushaadu mid ka weyn, halka midabada madow ay bixin karaan dareen dulmi, muraayadda muraayadduna waxay noqon kartaa xitaa dulmi badan, sidaa darteed musqusha si loogu xiro muraayad, waxaa fiican in la doorto midabyo fudud oo musqusha ah!
Musqusha waxaa lagu qalabeeyaa muraayado, nalka musqusha waa mid daciif ah, iyadoo aan loo eegin qaabka midabka musqusha, wuu yaraan doonaa, ka dib milicsiga musqusha muraayadda, sida iska cad musqusha ayaa ka sii liidata oo cidhiidhi ah. Haddii musqusha ay mugdi tahay, meesha ay milicsiga ka jirto, muraayada ayaa si cad u yeelan doonta iftiin xoog leh, markaa farqiga u dhexeeya iftiinka iyo mugdiga musqusha, arag iftiinka muraayadda musqusha ayaa fududaan doonta inay dadka ka dhigaan inay deggan yihiin. Haddii laydhku shidan yahay, musqusha weli wey mugdi badan tahay oo tayada isticmaalka muraayada si weyn ayaa loo dhimay. Marka lagugula talin maayo inaad naqshadeeysid suuliga daciifka ah, dadka qaar waxay u maleynayaan in muggu uu yahay mid xasiloon, runti, arinta feng shui iyo muraayadaha kuma haboona.
Hore:: Qasabada biyaha? Daxalaystay? Biyuhu Ma Gaabanayaan? Gacmaha Sida loo Hagaajiyo Next: Ma ogtahay sida xun ee musqusha “uraya” u tahay? Raadi Isha saxda ah ee lagu hagaajin karo!